मेयर ज्यु पिसाब फेर्न त पाउँ ,सार्वजनिक जमिनका घर हटाऔं::Best News Experience from Nepal
मेयर ज्यु पिसाब फेर्न त पाउँ ,सार्वजनिक जमिनका घर हटाऔं
गुल्मी । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका भित्र रहेको सदरमुकाम तम्घास बजार भित्र यहाँका मेयर डिल्लीराज भुसालले ‘नो पार्कीङ्ग’ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । यस कार्यक्रमले बजारमा भई रहने सडक जाममा राम्रो सुधार देखिएका छ तर कतिपय ब्यवहारिक पक्षमा भने सम्वन्धित निकायको दृष्टी पुग्न जरुरी देखिएको छ ।
बढि मात्रामा ‘नो पार्किङ्ग’ को असर साना ब्यवसायी र सर्वसधारणलाई परेको छ भने ठुलालाई जे गरे पनि भएको छ । ठुला ब्यापारिहरुले दिनैभर आफ्नो पसल अगाडी मालबाहक ट्रकहरुमा सामानहरु लोड–अनलोड गरेर सडक जाम गरी रहेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरी प्रमुख डोरबहादुर थापा भन्छन् –‘ तिनै ठुला भनाउँदाहरुले जे गरे पनि हुने , उनिहरुले ब्यपार गरिरहने , पसल अगाडी गाडी जाम गरिरहने भएकै कारण हामीले रेसुङ्गा नगरपालिकालाई नो पार्किङ्गको अवधारणा पेश गरेका हौ , मालवाहक ट्रकहरुका लागि सिमित समय तोकिएको छ , त्यो समय बाहेक हामीले देखे छाड्दैनौ, हाम्रो आँखा छलेर अझै पनि मन परी गरेको भए सुचित गर्नु होला । ’
उनले मालबाहक ट्रकहरुले बिहान ९ देखि ११ बजे सम्म र दिउँसो ३ देखि ५ बजे सम्म सामानहरु लोड अनलोड गर्न नपाईने बताए । तर हिजो मात्र तम्घास बजारमा सो समय बाहेकको समयमा ट्रकहरु रोकिएका थिए । धेरै बेर जाम भएको थियो । मोटर साईकलहरु तेकिएको पार्किङ्ग स्थानमा जान नसकेर हैरान थिए ।
ट्रक व्यवसायी स्रघ गुल्मीका अध्यक्ष समेत रहेका मेयर डिल्लीराज भुसाललाई ईङ्गित गर्दै ट्रकका कारण जाममा परेका मोटरसाईकलवालाहरु भन्दै थिए–‘मेयरका ट्रकहरुलाई भने जति बेला पनि फ्रि हामी मोटरसाईकलवालालाई भने बाटोमा पिसाव फेर्न पनि गाह्रो ? ’
ब्यवहारिक रुपमा हेर्ने हो भने मेयर भुसालको घरमा जो कोही भेट्न आई रहने कुरा स्वभाविक हो । उनका घर अगाडी गाडी रोकि रहेका फोटाहरु दिनहुँ फेशबुकमा पोष्ट गरिरहेका छन् । उनैका घर नजिकै रेडियो रेसुङ्गा र रेसुङ्गा टेलिभिजन छ । यी दुई सञ्चार माध्यममा पनि मानिसहरु आई रहने, छिन मै सञ्चारकर्मीहरु भित्र पस्ने र जाने भई रहन्छ ।
यी दुई सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मीहरु भित्र आएर क्याम्रा झिकेर फर्किने बेला सम्म पनि अगाडी मोटर साईकल टेकाउन पाउँदैनन भने त्यो अब्यवारिक हुन जान्छ । यसको उदाहरण सबैका लागि हो ।
कार्यालय समयभर मोटर साईकल सडकमा राख्ने कर्मचारी, र दिनैभर पसल अगाडी मोटर साईकल राख्ने ब्यापारिहरुका लागि यो कार्यक्रम सह्रायिन छ । तर बजार गर्न आएका मानिसहरु , केहि बेर होटलमा भात खान आएका ग्राहकहरुलाई त्यतिञ्जेल मोटर साईकल जाम नहुने गरी रोक्न दिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
यो कार्यक्रम लागु गरिए देखि ब्यापारहरु मुख्य बजारमा कम हुन थालेको गुनासो ब्यापारिहरुले गरेका छन् । सोमवार दिउँसो पुतली बजारमा फलफुल किन्न आएका एक ब्यक्ति त्यहाँ पार्किङ्ग समस्याले अलि पर मिलन चोकमा पुगे । त्यहाँको पसल अगाडी पार्किङ्ग गरेर ५ सयको फलफुल किनेका उनले बढिमा १५ मिनेटको अवधीमा ट्राफिकबाट १ हजार जरीवाना तिरेको गुनासो गरे ।
त्यस्तै दिनभरी सडक छेउछाउँमा गरिवीको बिस्कुन सुकाउँदै बसेका नाङ्गला ब्यापारिहरुको ब्यवस्थापन पनि गर्नै पर्छ । गरिवी देशैभरको समस्या हो , उनिहरुलाई निश्चित स्थानमा राखिनु पर्छ । यसबारे मेयर भुसालको ध्यानकृष्ट गराउँदा उनिहरुका लागि छिट्टै निश्चित ठाउँमा ब्यवस्थान गर्ने तयारी थालेको बताए ।
उनले पार्किङ्गका बारेमा पनि केहि बेरका लागि ब्यवहारिक पक्षलाई पनि हेरिने बताए । हेलमेट संगै छ, एकैछिन मात्र हो भने जरिवाना गर्न नहुने धारणा राखे । तपाई ट्रक ब्यवसायीहरुको अध्यक्ष पनि भएकोले त्यही भएर ट्रकहरुको मनपरी हटेन भन्ने गुनासो छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने –‘अलि पहिल्लै हो म अध्यक्ष भएको अहिले त्यो समिति निष्कृय छ ।’
उनले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई नकरात्क भन्दा पनि सबैको सकरात्क सुझाव र सहयोगको खाँचो छ । बजार अहिले खुल्ला र सफा देखिन्छ । तर कतिपय कालो मन भएका ब्यापारिहरुले अझै पनि आफ्नो पसल भन्दा अगाडीको सार्वजानिक जमिन ओगटेर ब्यापार गरी रहेका छन् ।
धेरैले सार्वजनिक जमिन ओगटेर घर बनाई रहेका छन् । वडा नम्वर ९ का वडाध्यक्ष नारायण बरालले एक ब्यक्तिले तम्घासको खोला माथी बनाउँदै गरेका घर मालिकलाई त्यसरी सार्वजनिक जमिनमा नबनाउन रोक्न आग्रह गरे ।
तर उनलाई बाघलाई नटेर्ने ब्यक्तिका सामु श्याल जस्तै ठानियो । उनले आफुले नसकेर नगरपालिकालाई सिफारिस गरेको गुनासो गरे । मेयरलाई सबैको यस्तो प्रश्न छ–‘ सडकमा एक छिन गाडी रोकेर पिसाव फेर्न जाँदा त जरीवाना गराईन्छ भने तपाई कै आँखा अगाडी र तपाईकै हेलमेलमा रहेका मान्छेले सार्वजनिक जमिनमा घर बनाउँदा के हेरेर बस्नु भएको छ ?
विगतमा सिडियोले नसकेको काम हामी गछौं भन्ने तपाईले अब त्यो चुनौतीको सामना गर्नेकी नगर्ने ? त्यस्तै ति ठुला भनाउँदा ब्यापारिहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि मनपरी राखेको ब्रेकर हटाउने कि नहटाउने ? पिच गरेको सडकमा ब्रेकर राख्न पाईदैन भन्छन ट्राफिक प्रमुख थापा । त्यस्तो नियम नमान्ने यहाँका ब्यापारि को हुन ? कृपया सर्वसाधरणको यो सवालको सम्वोधन तत्काल गर्नु होला ।
फेरी पनि सबैको यो प्रश्न दोहराउ छौ कि मेयर ज्यु, एक छिन मोटर साईकललाई रोकेर पिसाव फेर्न त पाउँ र गर्ने नै हो भने पहिला सार्वजनिक जमिनमा बनेका घरहरु हटाऔं ।